कोरोना भ्याक्सिन बनेसङ्गै , सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्ने अनुमान ! कति पुग्छ मुल्य ? हेर्नुहोस – – Life Nepali
कोरोना भ्याक्सिन बनेसङ्गै , सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्ने अनुमान ! कति पुग्छ मुल्य ? हेर्नुहोस –
कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लागेको खण्डमा तोलाको १ लाख रुपैयाँ नाघेको सुनको मूल्य ७५ हजार हा राहारीमा झर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । निषेधाज्ञाका का रण कारोबार बन्द भएको बजारमा मूल्य घट्ने अनुमा नले अत्याधिक सुन किनेर राखेका व्यवसायी चिन्तामा छन् भने सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने देखिएको छ । लकडाउन खुला भएपनि फेरी कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि भदौ ४ गतेदेखि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण नेपाली सुन बजार बन्द छ । *** पूरा विवरण हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
कोभिडका कार ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि नेपाली बजा रमा धेरै समय सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाएर तोलाको १ लाख रुपैयाँ नै नाघ्न पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २ हजार डलर नाघ्यो । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि सुनमा लगानी गर्ने बढ्दा अन्तर्राष्ट्रियसँगै नेपाली बजार प्रभावित भएको हो । कोभिडका कारण सुन व्यवसाय मात्र होइन, मानिसको जी वनयापन नै क’ष्टकर बनेको छ ।
तत्कालको प्राथमिकता आ धारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा गरगहना लगाउने कुरा दोस्रो विषय बनेको छ । सबै क्षेत्र ठप्प बन्दा मानिसको आम्दानी घट्न गएको छ । आम्दानी नै नभएपछि सुन लगाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउनुहुन्छ ।
दोस्रो कुरा एक वर्ष भित्र ५० प्रतिशत भन्दा बढीले सुनको मूल्य बढेको छ । यो अस्वभाविक हो । गत वर्ष ६० देखि ६५ हजार रूपैयाँ प्रतितोला रहेको सुनको भाउ अहिले एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ । चाहेर पनि मानिसले किन्न सक्ने अवस्था छैन । मानिसको क्रयशक्ति नै गुमेका कारण अहिले सुनका गरगहनाप्रति मानिसको इच्छा, आकांक्षा नै हराएको पूर्व अध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो । ६ महिना भयो व्यापारीले सुनको व्यापार गर्न सकेका छैनन् । अहिले सुन व्यापार गर्ने कुरा परै जाओस, ज्या’न जो’गाएर व्यापार व्यवसाय पछि गरौला भन्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु छन् । भ्याक्सिन नै पत्ता लागेमा पनि कोरोना भाइरसको असर अझै ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
यतिबेला सुन आयात पनि कम भएको छ । यता अन्तर्रा ष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न भ्याक्सिनको खोजी गरिरहेका छन् । यदि कोभिड १९ को भ्याक्सिन आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्वभाविकरुपमा बढेको सुनको मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको शाक्यले बताउनुभयो । अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढेपछि सुनबाट लगानीकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोडिने अनुमान गरिएको हो । खोप पत्ता लागेमा मूल्य घटेर ७५ देखि ८५ हजारको हाराहारी (रेन्ज)मा बस्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर १ हजार ५ सय देखि १ ह जार ७ सय डलर हाराहारीमा झर्ने अनुमान छ । यसअघि मूल्य बढ्ने हल्लाले बैंकबाट किलोका किलो सुन किन्ने व्यवसायीहरु पनि मूल्य घट्ने अनुमानसँगै पछिल्लो समय चि’न्तित देखिएका छन् । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Previous फेरि एकपटक हामिलाइ कुलमान चाहियो ! सहमत हुनेले सक्दो सेयर गरौ !
Next यस पालिको दशैंमा नयाँ नोट साट्न नपाइने” यस्तो क’डा नियम लागु हुदै !